Rheumatism: Cudurrada laabatooyinka [Talada, Jimicsiyada, Cunto, Daaweynta +]
Rheumatism waa eray dallad ah oo ku lug leh xaalado sababa xanuun dabadheer oo ku dhaca kala-goysyada iyo unugyada isku xidha.
Waxa jira in kabadan 200 nooc oo rheumatism.
Sidaan soo sheegnay, kala-goysyada, unugyada isku xira iyo muruqyada inta badan waxaa saameeya laabotooyinka, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in cilad-baareyaasha rheumatic ay sidoo kale saameyn ku yeelan karaan maqaarka, sambabaha, xuubka xuubka iyo xubnaha kale. - waxay kuxirantahay nooca cudurka rheumatisk uu yahay. Xusuusnow inaad nala soo xiriirto boggayaga Facebook hadaad hayso ra'yi ama faallooyin.
Bonus: Qeybta hoose ee maqaalka waxaad ka heli doontaa fiidiyow tababbaran oo leh leylisyo loogu habeeyey kuwa qaba laabatooyinka unugyada jilicsan.
Noocyada kala duwan ee laabotooyinka?
Markii hore, ka hor cilmi-baarista iyo aqoonta dhowaan waxay na siisay aragti wanaagsan oo ku saabsan waxa rheumatism-ka runti macnaheedu yahay, rheumatism-ka qiyaas ahaan waa guud ahaan oo 'waxaa la hoos keenay shanlo' - laakiin hadda waad ogtahay inay muhiim tahay in la ogaado nooca laabotooyinka ay ku saabsan tahay, si aad u hesho daaweyn iyo caawimaad fiican.
Waxaan sida caadiga ah u kala soocaannaa astaamaha cudurka 'autoimmune' iyo 'autoimmune rheumatic'. Xaqiiqda ah in baaritaanka rheumatisku yahay isdifaac jirka ah macnaheedu waa in habka difaaca jirka u gaarka ah u weeraro unugyadiisa. Tusaale tani waa Cudurka Seagrass, halkaasoo unugyada dhiigga cad ay weeraraan qanjidhada 'lacrimal' iyo qanjidhada candhuufta, taas oo iyaduna keenta indhaha oo qallala iyo af qalalan.
Xanuunada Lafa-Noqo ee 'Autoimmune Rheumatic'?
Sidii aan soo sheegnay, xanuunada rheumatic sidoo kale waxay noqon karaan kuwo iswada. Qaar ka mid ah qaababka ugu caamsan ee cilladaha cudurka 'rheumatic rheumatic system' waa nidaamka lupus erythematosus, laabotooyinka arthritis (arthritis), arthritis, cudurka Sjögren, scleroderma, polymyositis, dermatomyositis, cudurka Behcets, cudurka 'Reiter's syndrome' iyo cudurka 'psoriatic arthritis'.
7da qaab ee ugu caansan ee rheumatism
Waa run in qaar ka mid ah xanuunnada rheumatic-ka ay aad caan uga yihiin uguna baahsan yihiin bulshada Noorwiijiga - labadaba haday tahay heerka guud ee aqoonta, laakiin sidoo kale ilaa heerka ay dadku saameynayaan. Waxaa laga yaabaa in cudurka ugu caansan ee loo yaqaan 'rheumatoid arthritis (arthritis), ankylosing spondylitis (hore loogu yaqaanay Bechterews), fibromyalgia (Bløtvevsrevmatisme) arthrosis (Bararka ruugagga Tani), turqo, lupus og Cudurka Seagrass.
- Halkan waxaan ku aragnaa tusaale ka mid ah arthrosis jilibka. Osteoarthritis wuxuu inta badan saameyn ku yeeshaa kala-goysyada miisaanka.
Astaamaha guud ee laabotooyinka
Xanuun ama xanuun - badanaa lagu arkaa ama ku dhow hal ama in ka badan kala-goysyada
Xanuun marka aad dhaqaaqaysid aagga ay dhibaatadu gaadhay
Cadaadiska cadaadiska taabashada ama taabashada
Adkaysiga iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday - gaar ahaan ka dib xilliyada fadhiyada
Caawinta astaamaha jimicsiga / dhaqdhaqaaqa fudud, laakiin uga sii daraya jimicsi adag
Astaamaha murugsan ee isbeddelada cimilada. Gaar ahaan markii hoos loo dhigayo cadaadiska hawada ee barometric (marka loo eego cadaadis hoose) iyo qoyaan kordha
Gargaar markaad kululeyso aagga ay dhibaatadu gaadhay. Tusaale ahaan. by qubays kulul.
Waxaan la soconaa inaysan ahayn in cilado-rheumatic oo dhan ay leeyihiin astaamahan, iyo in baaritaanno badan oo rheumatic ay sidoo kale leeyihiin astaamo u gaar ah. Si kastaba ha noqotee, waa wax caadi ah dadka qaba laabotooyinka inay soo sheegaan ugu yaraan afar ka mid ah toddobada astaamood ee kor lagu soo sheegay. Xanuunka caadiga ah ee laabotadu waa 'qoto dheer, xanuun xanuun'.
Calaamadaha kale ee dhici kara waxaa ka mid ah:
anemia (Boqolkiiba dhiig oo hooseysa)
Dhibaato dhaqdhaqaaqa (Socodka iyo dhaqdhaqaaqa guud wuxuu noqon karaa wax adag oo xanuun badan)
shuban (Badanaa laxiriira bararka xiidmaha)
Jir dhis liita (Badanaa saameyn labaad sababta oo ah dhaqdhaqaaq la'aan / jimicsi la'aan)
Hurdo xumo (Hoos u dhaca tayada hurdada iyo soo kicinta waa astaan ​​guud oo caadi ah)
Caafimaadka ilkaha oo liita iyo dhibaatooyinka xanjo
Isbedelka cadaadiska dhiigga
qandho (Caabuq iyo barar ayaa sababi kara qandho)
CRP sare (Tilmaanta caabuq ama barar)
Heerka wadnaha oo sareeya
Dheef-shiid kiimikaad hooseeya (tusaale ahaan marka lagu daro cudurka qanjirada ee Hashimoto)
Dhibaatooyinka caloosha (Hawlaha caabuqa waxay gacan ka geysan karaan dhibaatooyinka caloosha iyo calool xanuun)
Dabacsanaan yar (Yaraanshaha dhaqdhaqaaqa kala goysyada iyo muruqyada)
Qabqabashada muddo (Cudurka arthritis iyo arthritis-ka waxaa laga yaabaa inay saameeyaan arrimo hormoonno ah)
qalalan (Had iyo jeer laxiriira Cudurka Seagrass)
subax tignaan (Noocyo badan oo arthritis-ka ayaa sababi kara subixii subaxnimo)
tabar-dari muruq (Cudurka arthritis / arthritis wuxuu u horseedi karaa luminta murqaha, dhaawaca muruqyada iyo xoog hoos u dhaca)
Luqun xanuun iyo qoorta oo adkaato
xad dhaaf yahay (Badanaa saameyn dugsi sare sababtoo ah socodka oo aan la dhaqaaqi karin)
dawakhaad (Dawakh ayaa ku dhici kara qaabab kala duwan oo arthritis iyo xaalado wadajir ah, kuwaas oo u noqon kara kuwa sare muruqyada ciriiriga ah iyo kala goysyada adag)
daal (Sababo la xiriira howlaha jirka ka socda, dadka qaba arthritis-ku badanaa waxay dareemi karaan daal iyo daal badan)
Lumid Miisaan (Miisaan culus oo khasaaro ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo arthritis)
Xanuun iyo xasaasiyad (Kordhin jilicsanaanta taabashada oo aan runtii xanuun noqon karin waxay ku dhici kartaa arthritis / arthritis)
Markii la isla qaato ama keligood, astaamahani waxay u horseedi karaan hoos u dhac aad u weyn oo ah nolosha iyo shaqeynta.
Daaweynta laabotooyinka iyo arthritis-ka
Ma jirto daawo toos ah oo loo daaweeyo cudurka rheumatism iyo arthritis, laakiin waxaa jira labadaba astaamo caafimaad iyo tallaabooyin dysfunctional ah - sida daaweynta jir ahaaneed, jimicsiga jimicsiga, daaweynta loo yaqaan 'chiropractic treatment', isbeddelada qaab nololeedka, talo bixinta cuntada, daaweynta, taageerooyinka (tusaale ahaan galoofyada cadaadiska) iyo qalliinka / qalliinka.
Talooyin: Isbeddel fudud oo maalinle ah oo dad badan ayaa ah isticmaalka galoofisyo isdabamarin si gaar ah loo waafajiyay og sharaabaad riixo (iskuxirayaashu waxay ka furanayaan daaqad cusub) - kuwani waxay run ahaantii gacan ka gaysan karaan kordhinta wareegga dhiigga ee faraha adag iyo gacmaha oo xanuuna, sidaas awgeedna waxay gacan ka geysanayaan sidii loo ilaalin lahaa shaqeynta nolol maalmeedka.
Liiska habab daaweyn kala duwan oo badanaa loo isticmaalo rheumatism
- Daaweynta Korantada / Daaweynta Hadda (TENS)
- Ku shaqeynta korantada
- Daaweynta jirka iyo jimicsiga jirka
- Daaweynta laser-ku yar-yar
- Isbeddelka hab-nololeedka
- Isku duwaha wadajirka ah ee loo yaqaan 'Chiropractic abaabulka' iyo xanuunka loo yaqaan 'chiropractic'
- Talada cuntada
- Daaweynta qabow
- Daaweyn caafimaad
- Taageerida kala goysyada (tusaale. Biraha ama qaabab kale oo taageero wadajir ah)
- Fasax jirro oo nasoe
- Daaweynta kuleylka
Daaweynta Korantada / Daaweynta Hada socota (TENS)
Daraasad dib-u-eegis ballaaran oo nidaamsan (Cochrane, 2000) ayaa soo gabagabeeyey in daaweynta korantada (TENS) ay wax ku ool u ahayd maaraynta xanuunka xanuunka arthritis-ka marka loo eego placebo.
Daaweynta elektaroonigga ah ee arthritis / arthritis
Daaweynta korantada ee korantada leh waxay muujisay wax ku ool ah ka soo horjeedka xanuunka arthritis (Ganesan et al, 2009).
Daaweynta jireed iyo jimicsiga jirka ee daaweynta arthritis / arthritis
Daaweynta jireed waxay saameyn wanaagsan ku yeelan kartaa kala goysyada ay saameynayaan sidoo kale waxay horseedi karaan kordhinta shaqada, iyo sidoo kale tayada nolosha oo la wanaajiyey. Jimicsiga laqabatimay iyo jimicsiga ayaa guud ahaan lagula talinayaa in la ilaaliyo caafimaadka wadajirka ah iyo caafimaadka guud ee qofka.
Daawaynta laser-ka hooseeya
Daraasadaha ayaa muujiyey in laser-ka hooseeya (oo sidoo kale loo yaqaan laser anti-inflammatory laser) ay ka shaqeyn karto yareynta xanuunka iyo hagaajinta shaqada daaweynta arthritis iyo osteoarthritis. Tayada cilmi baaristu waa xoogaa wanaagsan.
Is beddelka hab-nololeedka iyo arthritis
Caawinta in qofku haysto miisaanka, jimicsi sida saxda ah oo aan ugu yaraan wax cunin wuxuu aad muhiim ugu yahay tayada midka uu saameeyo arthritis-ka.
Tusaale ahaan, kordhinta culeyska iyo culeyska xad dhaafka ah waxay u horseedi karaan walaac xitaa culeys weyn oo ku saabsan laabatooyinka ay dhibaatadu saameysey, taas oo iyana horseedi karta xanuun badan iyo shaqo xumo. Haddii kale, kuwa qaba arthritis-ka waxaa inta badan lagula taliyaa inay joojiyaan sigaar cabista waxyaabaha la xiriira tubaakada, maadaama tani ay la xiriirto wareegga dhiigga ee liita iyo awoodda hagaajinta.
Isugeynta Buug-gacmeedka iyo Isku-darka Chiropractic ee arthritis
Aruurinta wadajirka ah ee la habeeyay ayaa taas muujisay abaabul wada jir ah oo uu sameeyo chiropractor (ama daaweeyaha gacanta) wuxuu leeyahay saameyn caafimaad oo la xaqiijiyay:
“Daraasad meta ah (Faransiis et al, 2011) ayaa muujisay in daaweynta buugga gacanta ah ee loo yaqaan 'osteoarthritis' ay leedahay saameyn togan marka loo eego kahortagga xanuunka iyo hagaajinta shaqada. Daraasaddu waxay ku soo gabagabowday in daaweynta buugga gacanta ay ka waxtar badan tahay jimicsi ee daaweynta cudurada arthritis-ka.
Talada cuntada ee arthritis-ka
Marka la eego in bararka (caabuqa) inta badan ku lug leeyahay cudurkaan, waxaa muhiim ah in aad xoogga saarto qaadashada cuntadaada cuntada ka hortagga caabuqa iyo cuntada - oo ugu yaraan ha ka hortagin waxyaabaha ku kallifaya inuu ku bato (sonkorta badan iyo qiimaha nafaqada oo yar).
Sulfate glucosamine marka lagu daro chondroitin sulfate (Akhri: 'Glucosamine' sulfate oo ka dhan ah xidhashada? ') ayaa sidoo kale muujisay saameyn ka dhan ah osteoarthritis-ka dhexdhexaadka ah ee jilbaha daraasad ballaaran oo la uruuriyay (Clegg et al, 2006). Liistada hoose, waxaan uqeybiney cuntooyin ay tahay inaad cuntid iyo cuntooyinka ay tahay inaad iska ilaaliso haddii aad qabtid arthritis / arthritis.
Cunnooyinka la dagaallama caabuqa (cuntooyinka la cuno):
Isteroberiga iyo miraha (tusaale ahaan, oranji, khudradda buluuga ah, tufaaxa, miraha, jeeriga, iyo miraha goji)
Kalluunka adag (sida salmon, mackerel, tuna iyo sardines)
Khudaarta cagaaran (tusaale, isbinaajka, kaabajka iyo broccoli)
Qaxwada (saameynteeda anti-bararka waxay kaa caawin kartaa la dagaalanka caabuqa)
Miraha (tusaale, yicibta iyo iniinta)
Si loo soo gabagabeeyo waxoogaa ku saabsan cuntooyinka ay tahay in la cuno, qofku wuxuu dhihi karaa waa in cuntada ay tahay mid loogu talagalay cunnada loogu yeero cuntada Mediterranean, taas oo ay ku badan tahay miraha, khudradda, khudradda, miraha dhan, kalluunka iyo saliidaha caafimaad leh.
Dabcan, cuntada noocaas ah waxay yeelan doontaa saameyn kale oo badan oo wanaagsan - sida koontarool dheeri ah oo ku saabsan miisaanka iyo guud ahaan nolol caafimaad leh nolol maalmeedka oo leh tamar badan.
Cunnooyinka kordhiya jawaab-celinta bararka (cuntooyinka looga fogaado):
Khamriga (tusaale ahaan, biirka, khamri guduudan, khamri cad iyo jinni)
Hilib la warshadeeyay (tusaale, hilib aan gubin oo aan cusbo lahayn oo soo maray dhowr hawlo ilaalin oo sidaas ah)
Cunto-shiilan (shiilay Faransiis iyo wixii lamid ah)
Gluten (dad badan oo qaba arthritis-ku waxay si xun ula falgalayaan gluten)
Waxyaalaha caano / lactose (Dad badani waxay aaminsan yihiin in caano laga fogaado haddii arthritis ku saameeyo)
Karbohaydraytyo dib loo sifeeyay (tusaale ahaan rooti khafiif ah, cajiin iyo dubitaanka la mid ah)
Sonkorta (sonkorta badan waxay kor u qaadi kartaa caabuq / barar)
Kooxaha cuntada ee aan soo xusnay ayaa sidaas awgeed qaar ka mid ah kuwa ay tahay in laga fogaado - maxaa yeelay kuwan waxay sii xumayn karaan arthritis-ka iyo arthritis astaamaha.
Daaweynta qabowga iyo arthritis (arthritis)
Si guud, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo hergabka astaamaha arthritis. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqada ah in qabowgu dejiyo geedi socodka bararka ee aagga. Si kastaba ha noqotee, waxaa mudan in la xuso in qof walba uusan si fiican uga jawaabin tan.
Massage iyo arthritis
Duugista iyo shaqada muruqyada waxay ku yeelan karaan saameyn astaamo yareynta muruqyada adag iyo kala-goysyada adag.
Daawooyinka iyo daawooyinka arthritis / arthritis
Waxaa jira dhowr daawooyin iyo daawooyin loogu talagalay in lagu daaweeyo arthritis-ka iyo arthritis astaamaha. Habka ugu caamsan waa in lagu bilaabo dawooyinka leh waxyeelada ugu yar ee taban kadibna isku dayo daawooyin xoog leh haddii kuwa hore aysan si sax ah u shaqeynin.
Nooca daawada loo isticmaalo way kala duwan tahay waxayna kuxirantahay nooca arthritis / arthritis-ka qofka uu ku dhacay. Xanuun-joojiyaha guud iyo dawooyinku waxay u yimaadaan qaab kiniin ah iyo kiniinno - qaar ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo adeegsado waa paracet (paracetamol), ibux (ibuprofen) iyo opiates.
Daaweynta cudurka arthritis-ka, waxa loogu yeero dawada lidka-rheumatic ee loo yaqaan 'Methotrexate' ayaa sidoo kale loo istcimaalaa - kani si sahal ah ayuu si toos ah uga shaqeeyaa nidaamka talaalka wuxuuna u horseedayaa horumar xaaladan dambe.
Qalliinka arthritis / arthritis
Noocyada qaarkood ee arthritis-ka nabaad-guurka, taas oo ah, arthritis-ku wuxuu sheegaa burburka iyo burburka kala-goysyada (tusaale ahaan xanuunka arthritis), waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la beddelo kala-goysyada haddii ay waxyeello gaarto oo ay sii shaqeyn weydo.
Dabcan, tani waa wax aadan dooneynin waana inay noqotaa meesha ugu dambeysa oo ay ugu wacan tahay qatarta qalliinka iyo qalliinka, laakiin taas oo laga yaabo inay aad ugu baahdo xaaladaha qaarkood.
Tusaale ahaan, qalliinka miskaha sinta iyo jilibka ayaa caadi u ah cudurka arthritis-ka, laakiin nasiibdarro ma aha wax dammaanad qaad ah oo sheegaya in xanuunku kaa dhammaan doono. Daraasadihii ugu dambeeyay ayaa shaki geliyay in qalliinka uu ka fiican yahay kaliya jimicsi - iyo daraasadaha qaar ayaa sidoo kale muujiyay in tababarka loo diyaarshay ay ka fiicnaan karto faragelinta qalliinka.
Xaaladaha badankood, cortisone ayaa la tijaabin doonaa ka hor inta aan loo aadin qalliinka daran.
Fasax jirro iyo arthritis
Wajiga ubaxa iyo arthritis-ka, fasax xanuun iyo nasasho ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto - badiyaa marka lagu daro daweynta. Horumarka jirada wuu kala duwanaan doonaa mana suurtagal in la yiraahdo wax gaar ah oo ku saabsan muddada xanuunka arthritis-ka si xanuunsan loo soo sheegi doono.
Waa NAV waa hay'adda abaabulka iyo fasax jirran. Haddii xaaladdu ka sii darto, tan waxay u horseedi kartaa qofka inuu shaqeyn kari waayo, naafo noqdo, ka dibna ku tiirsanaado macaashka naafada / bisilka naafada.
Daaweynta kuleylka iyo arthritis
Si guud, waxaa lagu talinayaa in lagu daaweeyo hergabka astaamaha arthritis. Tan waxaa u sabab ah xaqiiqada ah in qabowgu dejiyo geedi socodka caabuqa aagga - kuleylku wuxuu ku shaqeyn karaa dhinaca ka soo horjeedda wuxuuna kordhin karaa geedi socodka caabuqa ku wajahan wadajirka ay saameeyeen.
Taas ayaa la yiri, waxaa badanaa lagugula talinayaa inaad kuleylka u isticmaasho kooxaha muruqyada ee u dhow diiradda astaamaha xanuunka muruqyada adag, ee murugada leh. Dabcan, tani macnaheedu maahan in arthritis iyo koonfurta aysan gacmaha is qabsan - laakiin saameynta istaroog kuleyl ah oo loogu talagalay arthritis iyo arthritis ayaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan heerar badan oo gacan ka geysanaya kordhinta ladnaanta jirka iyo maskaxda.
Jimicsiyada iyo tababbarka loogu talagalay kuwa qaba laabatiimiska
Tababbarka ku habboon barkadda biyaha kulul, oo leh guutooyin jimicsiga ama culeyska saamaynta hoose ayaa aad waxtar u yeelan kara kuwa qaba laabotooyinka - waana mid aad loogu taliyay. Safarada dhulka qallafsan sidoo kale waa hab wanaagsan oo qaab ahaan loo joogi karo. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad sameyso jimicsi maalinle ah iyo jimicsi dhaqdhaqaaq - sida ka muuqata fiidiyaha hoose.
VIDEO: 17 Layli ka dhan ah Polymyalgia Rheumatism
Polymyalgia laabotooyinka waa xanuun rheumatic ah oo lagu garto falcelinta bararka, iyo xanuunka qoorta, garbaha iyo miskaha. Fiidiyowga hoos ku xusan, lafopractor iyo daaweeye dhaqancelin ah Alexander Andorff wuxuu muujinayaa 3 barnaamijyo tababar oo kala duwan - mid ka mid ah meelaha ugu caansan - wadar ahaan jimicsi 17 ah.
Ogaanshaha jimicsiyada dhaqdhaqaaqa ee loogu talagalay kuwa qaba fibromyalgia aad ayey muhiim u yihiin. Fiidiyowga hoose wuxuu muujinayaa shan layli jilicsan oo kaa caawin kara inaad joogteyso socodka, wareegga iyo yareeynta xanuunka.
Ku soo biir qoyskeena oo iska qor kanaalkeena YouTube (halkaan riix) si aad u hesho talo bixin jimicsi bilaash ah, barnaamijyo jimicsi iyo aqoon caafimaad. Ku soo dhawow!
Sidoo kale aqri: 7 Jimicsi oo loogu talagalay laabatooyinka
Su'aalo ma ka qabtaa maqaalka mise waxaad u baahan tahay talooyin dheeraad ah? Nala soo xiriir toos ah facebook page ama sanduuqa faallooyinka ee hoosta ku yaal.
La wadaag dareenkaaga si aad u kordhiso aqoonta Rheumatism
Aqoonta udhaxeysa guud ahaan bulshada iyo xirfadleyda caafimaadka ayaa ah habka kaliya ee lagu kordhin karo diirada dhanka horumarinta qiimeynta cusub iyo qaababka daaweynta ee ogaanshaha xanuunada xanuunka. Waxaan rajeyneynaa inaad waqti siiso si aad arintan ugala wadaagto warbaahinta bulshada oo aad dhahdo waad ku mahadsantahay caawimaadaada. Wadaagistaada micno weyn ayey u leedahay dadka ay waxyeelladu gaartay.
Xor ayaad u tahay inaad riixdo batoonka kor ku yaal si aad dhexda u wadaagtid. Mahadsanidiin dhammaan dadka la wadaaga.
PAGE xiga: - Tani waa inaad ka ogaataa Fibromyalgia
Talinayo Is-Caawinta Rheumatism
Isticmaalka riixo Buuq (Xiriiriyaha wuxuu ka furmayaa daaqad cusub).
Isticmaalka Kareemka Arnica (taas oo this) ama qaboojiyaha kala-goysyada iyo murqaha xanuun.
Linn wuxuu leeyahay,
Ma si arthritis-ku u horseedi karo osteoarthritis? Waxaan ka qaaday MRI guga miskaha halkaasna waxay ka heleen natiijooyin la jaan qaadaya arthritis-ka ee kala-goysyada IS (iyo sidoo kale dhabarka dambe). Daraasad cusub oo sawir-qaadis ah dhawaan, CT, ayaa muujisay osteoarthritis. Waa maxay sababta labaduba aan loo soo bandhigin? Ma runbaa in MRI ay muujin karto isbeddeladii hore? Waxaan muddo dheer la halgamayay qallafsanaan iyo xanuunka dhabarka iyo miskaha (hoos u dhaca barida), jilbaha, miskaha, anqawyada, qoorta iyo garbaha. Haddii kale, waxaan sidoo kale leeyahay barar sinta, kala-goysyada dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa ee anqawyada iyo dib u lulitaanka. Waxaan ahay 30-kii horraantii oo waxaan u maleeyay inay yihiin dad da' ah oo ku dhacay osteoarthritis.
Maaha wax aan caadi ahayn in dadka da'doodu tahay 30 sano ay qabaan osteoarthritis / osteoarthritis. Gaar ahaan adigoon tixgelinayn inaad dhabarka hoose ku leedahay soo-dhac, taasoo tilmaamaysa inay jirtay xoogaa culays ah sannadihii la soo dhaafay - iyo in tani ay si tartiib tartiib ah u keentay dib-u-dhac.
Arthritis si fudud macneheedu waa bararka kalagoysyada waxayna inta badan ku dhici kartaa kala-goysyada kuwaas oo sidoo kale saameeya osteoarthritis. Waxay u badan tahay in ay tahay halkii aad ka heli lahayd nuugista shoogga sababtoo ah disc intervertebral disc ah oo aan shaqaynayn taas oo macnaheedu yahay in ay jiraan cadaadis badan oo ku saabsan kala-goysyada iyo kala-goysyada wejiga ee aagga - taas oo keeni karta kororka dhacdooyinka xirashada.
Aad baad ugu mahadsantahay jawaabta degdega ah.
Waxaa la sheegay in laga yaabo in aan qabo arthritis / spondylitis. Tani waxay ahayd ka hor intaanan qaadan CT-ga. Ma la malayn karaa in natiijadu ay sabab u tahay dib-u-dhaca oo aan ahayn tusaale ahaan; Tawbada la sheegay? Mise waxaa sabab u noqon kara cudurka laabotooyinka iyo laabotooyinka labadaba? Waxaan ku leeyahay finan ka-hortagga CCP, laakiin ma aha HLA-B27. Nashaadkee ayaa wanaagsan in la sameeyo? Dabaal?
Gebi ahaanba waa suurtogal.
Jimicsiyada inta badan lagu taliyaa waa mashiinka elliptical iyo dabaasha - iyo sidoo kale tababarka biyaha kulul haddii aad marin u heli karto. Waxa kale oo suurtogal ah in uu jiro dalab agtaada ah - oo ku habboon kuwa qaba xanuunka laabotooyinka - haddii aad la tashato degmada.
Harrieth Nordgård (NORDKJOSBOTN) wuxuu leeyahay,
Waa qasab in marka aad cudurkan kugu dhacdo, in aan ka helnay warqad dhakhtar oo kale ah. Waxaan filayaa in tani ay ahayd mid weyn!
HC wuxuu leeyahay,
Wuxuu leeyahay dhabar xanuun, sinta iyo garabka oo hooseeya.
Mararka qaarkood, waxaan sidoo kale xanuun ku hayaa kala goysyada farta iyo anqawga. Waxaan ahay 36 jir. Arintaan sanado badan ayaan dhibay hadana xanuunku aad buu usii daran yahay, waxaan ku qasbanaaday in aan dhaqtarka waydiiyo hadii ay ii suurta gali wayday in la ii sii gudbiyo si aan u ogaado waxa qaldan.
Waxaa loo sheegay in aysan jirin wax badan oo ay noqon karto. Iyadoo fariin ah inaad u tagto dhakhtarka jimicsiga oo aad qaadato brexidol. Kaliya 2 toddobaad ku qaatay voltaren oo ha u malayn inay wax badan ka tartay. Dhakhtarku waxa uu dhiigga ka qaaday lix bilood ka hor.
Waxaan helay natiijo wax ku ool ah oo ku saabsan shay ku socday kala-goysyada. Intaa waxaa dheer, waxaan aadaa daawada cadaadiska dhiigga. Miyaan ku kalsoonaadaa in dhakhtarku u malaynayo in aanay waxba iga khaldanayn? Waxaa igu xanuunaya ilaa xad ay suurtogal tahay inaan shaqeeyo oo aan baabuur kaxeeyo. Xanuunka waxaa kasii daran fadhi iyo jiif. Waxoogaa way fiicnaanayaan markaan dhaqaaqo laakiin si degdeg ah ayay u soo noqdaan. Wuxuu ku jiraa fasax jirro dhowr jeer sannadkii taas awgeed. Miyaan aadi karaa takhtarka laf-dhabarka ee gaarka ah? Ka fakar in tani ay ahayd mid aad qaali u ah. Waxaan rajeynayaa inaad iga dhigi karto mid caqli badan.
Tani waxay u egtahay mid niyad jab iyo daciifnimo labadaba. In sida kubbadda la tuuro oo kale lagu tuuro waxay runtii saameyn kartaa maskaxda iyo caafimaadka guud.
1) Ka waran tababarka iyo jimicsiga? Si joogto ah ma u jimicsato? Waa maxay noocyada jimicsiga adiga kuu shaqeeya?
2) Ma waxaad qortaa in shaybaarada dhiiggu ay ahaayeen kuwo togan oo la xiriira kala goysyada? Halkan waxaad waydiisan kartaa nuqul ka mid ah natiijada baaritaanka dhiigga - haddii ay jirto natiijo wanaagsan, waxaa jira calaamad xooggan oo ah inaad u gudubto baaritaanka rheumatological.
3) Waa inaad tixgelisaa inaad aado xidhiidh kale oo asaasi ah (chiropractor or manual therapist) kaas oo waliba xaq u leh in laguu gudbiyo baadhista laabotooyinka. Labadan kooxood ee shaqadu waxay kaloo xaq u leeyihiin inay tixraacaan sawir-qaadista.
4) Sawir hore ma la qaaday? Hadday sidaas tahay, maxay ku soo gunaanadeen?
Fadlan u tiri jawaabahaaga sida kor ku cad - tani si loo helo wada hadal cad.
Waad ku mahadsan tahay jawaabta degdega ah:)
Haa, waa wax aad looga xumaado oo aad looga xumaado in la dareemo xanuun badan iyo dareen ah inaan la rumaysan ama si dhab ah loo qaadan.
1. Ma tababarto sida ugu badan ee aan haysto shaqo jidheed oo cadaalad ah iyo 0 faa'iido. Waxaan isku dayay in aan tababaro muddo, laakiin gabi ahaanba naftayda ayaan ku gubtay arrintan. Dareenka inaan daalanahay oo aan daalanahay sidii caadiga ahayd. Wuxuu qaataa kaabis oo waxba kama maqna marka loo eego baaritaanka dhiigga. Haddii kale ma heshay jimicsiyo fudud si aad garabka u wanajiso.
Dhanka baarista dhiigga, waxaa la ii sheegay in la ii diri karo takhtar takhasus leh, laakiin aad ayay dhif u ahayd in ay dhab ahaantii heleen wax aan loo baahnayn sida uu dhakhtarku sheegay.
3. Waxaan wax yar ka akhriyi doonaa daaweeyaha gacanta haddii ay tani wax noqon karto.
4. Sawiro lama qaadin sida uu dhakhtarku u malaynayo in tani ay tahay wax aad iyo aad looga dayrinayo oo loo arko mid aan loo baahnayn.
Sida aad malaha u fahantay, waxa aan dareemayaa in aan madaxa ka garaacayo gidaarka. Iyadoo la tixgelinayo beddelka GP-ga. Ma run ahaantii kiiska in aysan jirin wax macno ah mr ama ct?
Baaritaanka dhiiga Waxay ahayd arrin rheumatoid ah.
Tani waxay tilmaan cad u tahay baadhis dheeraad ah oo uu sameeyo dhakhtarka rheumatologist. U gudbinta lafteeda baaritaanka guud waxaa difaacaya natiijadan togan ee laga helay baaritaanka dhiigaaga.
Naso wuxuu leeyahay,
Hi, ma kula talin kartaa dhakhaatiirta qaar kilinig kasta oo gaar loo leeyahay oo ku fiican baadhista laabotooyinka iyo talooyinka la doorbidayo baadhista daalka?
Ma qof nasiib darro badan oo haddii ay wax dhacaan, markaas aniga ayay igu dhacdaa… Shimbir shil ah. Hadda waxaa dhacay dhicis badan, qalliin xiniinyaha, bararka laabta, iwm. Dabadeed dareento in dhaqtarku ugu dhakhsaha badan uma maleynayo inay jiraan wax intaa ka badan.
Maxayse noqon kartaa;
Waxaan la halgamaa daal joogto ah oo weligay ma nasan xitaa 8-10 saacadood oo hurdo ah ka dib. Waa in uu seexdaa si uu maalintii u seexdo. Waa 36 jir. Waxay lahaayeen bakhaarro birta ah oo kor iyo hoos u socda, laakiin baaritaankii dhiigga ee ugu dambeeyay wuxuu muujiyay birta caadiga ah, laakiin aad u yar oo fitamiin D ah.
Waxa la iga qalay meniscus-ka iyo seedaha cruciate sanado badan ka hor. Laakin la halgamaya xanuunka labada jilib, kala goysyada faraha iyo sinta. Gaar ahaan isbedelka cimilada.
Inta badan waxaa igu dhaca qabow, qabow baraf ah cagahayga, faraha iyo barida.
Daalay oo aan xoogga saarin oo aan awoodin in ay sii wadaan. Marka qof wax sheego, haddaan la qorin waa la ilaawaa.
Xanuunka gacmaha iyo jilbaha ayaa dareemaya xanuun. Xanuun baa i haya haddaan foororsado, jaranjarada fuulo, fadhiisto ama aan jiifsado. Aad ayuu u qallafsan yahay oo u degdegaa haddaan kaco.
Marar badan ayaan u duulaa musqusha waxaanan dareemaa in aan kaadiyo in ka badan inta aan cabbo.
Waxaan rajeynayaa inaad ku caawin karto.
Si aad ah ugu talin Lillehammer Rheumatism Hospital. Waxay yihiin gabi ahaanba ifafaale.
Mette N wuxuu leeyahay,
Hello. Waxaan la yaabanahay hal shay. Waxaan qabaa lafo-xanuun, dhaq-dhaqaaqyada qaarna waxaan ku "goor gaaban". Dareen aad u xun, laakiin wuxuu jiraa daqiiqad yar oo kaliya waan soo noqday. Wiil yar ayaa qoor madaxa ka soo booday.
Elin wuxuu leeyahay,
Xog badan oo fiican. Xogtii ugu fiicnayd ee ilaa hadda la sii daayay.
Merete Repvik Olsbø wuxuu leeyahay,
Hello. Waa maxay sababta ankylosing spondylitis u gudubtay?
Tani waxay ahayd mid aad u wanaagsan in la akhriyo!
Xog badan oo faa'iido leh ayaa la ururiyay.
Hello. Waxa aan la halgamayaa labada suul iyo cududaha oo i xanuunaya si ay ii xanuunsadaan. Mararka qaarkood waxaan lumiyaa dareenka gacmahayga - sidii iyagoo gebi ahaanba curyaan ah. Markaa waa in qofku is weydiiyaa oo uu is weydiiyaa muxuu ku samayn karaa arrintan? Mahadsanidiin horraan.
Melita wuxuu leeyahay,
Hi! Scoliosis ma sababi karaa caabuqa laabotooyinka ee xubnaha barafka (sacroilitis)?
Nicolay v / Ma Hesho wuxuu leeyahay,
Scoliosis ma keeni karto bararka rheumatic ee kala-goysyada iliosacral, laakiin sababtoo ah qallooca aan sinnayn, waxaad la kulmi kartaa in lafaha miskaha uu ku badan yahay dhinaca kale - taas oo markaa u horseedi karta hypomobility iyo hoos u dhaca shaqada.
Laakiin si sax ah ma u fahmayaa haddii aan kuu fahmo inaad leedahay laabotooyinka? Xaaladdaas, tani waxay hubaal ahaan u horseedi kartaa xanaaq iyo barar ku dhaca wadajirka miskaha (sacroilitis).
Nicolay v / Ma Hesho
Waxa la iga helay m46.1 spondylarthritis. Waxay lahayd daawaynta joogtada ah ee laba dawooyinka noolaha oo kala duwan iyada oo aan lahayn saamayn lagu qanco. MRI dhamaadka Sebtembar wali waxay muujinaysaa isbeddellada arthritis-ka, bararka dhuuxa lafta qaybta sare iyo dhexe ee bidix IS kala-goysyada inkastoo daaweyn bayooloji ah hal sano. Scoliosis-ka waxaa lagu ogaadey raajada 2018. Midig-convex thoracic iyo bidix-convex lumbar s-qaabeeya, wax yar ka hor inta aan la bilaabin daaweynta daroogada bayoolojiga, laakiin qofna ma sheegin ka hor inta aan la xakameynin bishii Oktoobar ee sannadkii hore. Sababtoo ah daaweynta bayooloji waxay leedahay saameyn yar, waxay aaminsan yihiin in scoliosis ay abuurto barar farsamaysan ee wadajirka IS. U aaditaanka baadhitaan dheeraad ah oo ku saabsan lafaha, laakiin sugitaanka ayaa aad u dheer. Aniga ahaan, waxay asal ahaan u egtahay mid aad u la yaab leh in scoliosis laga yaabo inay tahay sababta oo aan ahayn spondy arthritis-ka ee laygu sheegay oo la xaqiijiyay MRI. Aad baan u fogaaday, waan ka xumahay laakiin waxaan rajaynayaa in qof u adkaysan karo inuu akhriyo oo ka jawaabo. Aad ayaan u quustay sababtoo ah waxa la ii qaaday dawo bayooloji ilaa baaritaanka xiga, markaas oo la go'aamin doono waxa la sameeyo marka xigta. Waxa aan helay Vimovo, laakiin waxa ay ii keentaa dhibaatooyin badan oo caloosha ah